ဂူထဲက လူငယျမြားအစာမစားဘဲ အသကျရှငျသလား | OnDoctor
By Wai Yan Lin	 On Jun 28, 2018 Last updated Jun 28, 2018
ဂူထဲက လူငယ်များအစာမစားဘဲ အသက်ရှင်သလား
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နည်းပြအပါအဝင်ကလေးငယ်၁၃ဦးပျောက်ဆုံးနေသောသတင်းသည် လူအများအထူးစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေသောသတင်းဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ သတင်းနှင့်ပတ်သတ်ရ်ျလူအများသိချင်နေသောကိစ္စတစ်ရပ်မှာ လူတစ်ယောက်အနေဖြင့်အစာမစားဘဲဘယ်လောက်အချိန်ကြာအသက်ရှင်နေနိုင်သလဲ.?
အဆိုပါမေးခွန်းအတွက်အစာပြတ်လပ်နေသောလူရဲ့ နဂိုရှိသောကျန်းမာရေး/ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ရောက်ရှိနေသောပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားပေါ်များစွာမူတည်ပါတယ်။ခဏတာအစာမစားခြင်းသည် အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုထိန်းမူကိုကောင်းမွန်နိုင်သည်ဆိုသော်ငြားလည်း ၄၈နာရီကျော်သည်အထိ အစာမစားရပါမူ မိမိရဲ့ကိုယ်တွင်းအချိုဓာတ်စတင်ကုန်ဆုံးပြီး ၇၂နာရီကျော်လာလျှင်ကိုယ်တွင်းသိုလှောင်ထားသောအသားဓာတ်များလျော့ကျလာပါလိမ့်မယ်။ကြွက်သားပျော့လာကာ အရိုးသန်မာမူလျော့ရ်ျ ကျောက်ကပ်နှင့်နှလုံးပြသနာများစတင်ခံစားလာရပါလိမ့်မယ်။ထို့ကြောင့် လူတယောက်အစာမစားဘဲအသက်ရှင်နေနိုင်မူသည် ထိူသူရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုပေါ်များစွာမူတည်ပါတယ်။သုတေသနပြုချက်များအနေဖြင့်လည်းလူတစ်ယောက်အစာမစားဘဲ ၈ရက်မှ၁၃ရက်ထိနေနိုင်သည်ဟုဆိုသော်လည်းကျန်းမာရေးအထူးကောင်းမွန်သူများအဖို့ရက်၃၀မှရက်၄၀ထိနေနိုင်သူများလည်းရှိသည်ဟုလည်းဖော်ပြကြပါတယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအချိုဓာတ်နည်းလာသောအခါ သွေးတွင်းအချိုဓာတ်လည်းနည်းလာပါတယ်။အစာမစားရသောအခါ အသည်းမှသိုလှောင်ထားသောအချိုဓာတ်ကိုကုန်ဆုံးလာပြီး အချိုဓာတ်နည်းသောဝေဒနာများခံစားရနိုင်ပါတယ်။ခေါင်းမူးခြင်း။ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်သတိလစ်သည်အထိ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အစာမစားရသောကြောင့် ကိုယ်တွင်းဓာတ်များကုန်ဆုံးကာ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ်နည်းခြင်းကြောင့်နှလုံးခုန်မူမမှန်ခြင်းနှင့်ကြွက်သားပျော့ခွေခြင်းစသည်တို့ကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်ချို့တဲ့လာသောကြောင့် ခြေလက်ထုံကျင်ကိုက်ခဲခြင်းနှင့်နှလုံးပြသနာများရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်။ဆိုဒီယမ်ဓာတ်နည်းခြင်းကြောင့် သတိဝေးဝါးခြင်း။အားနည်းလာခြင်းစသည်တို့ကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဓာတ်ချို့တဲ့မူ အမြန်ဖြည့်တင်းမူမရှိလျှင် အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ်လိုအပ်သောကယ်လိုရီအပြည့်အဝမရရှိခြင်းကြောင့် လူပ်ရှားမူများအားနည်းလာကာ ကိုယ်ခန္ဓာနူံးချိပျော့ခွေလာပါလိမ့်မယ်။
အစာမစားရသောကြောင့်သံဓာတ်ချို့တဲ့ကာသွေးအားနည်းသောလက္ခဏာများ အားနည်းခြင်းနှင့်နှလုံးမူမမှန်ခြင်စသည့်တို့ကိုခံစားရပြီး သွေးလည်ပတ်မူအားမကောင်းသောကြောင့် ကိုယ်တွင်းသွေးလည်ပတ်မူလျော့နည်းလာပါလိမ့်မယ်။
ကြွက်သားပျော့ခွေအားနည်းကာ အဆီမရှိသောကြောင့် ပိန်ချုံးချိနဲ့ခြင်းအဆင့်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ပိန်ချုံ့သောကြောင့် အားအင်မရှိခြင်း။ဝမ်းလျောခြင်း။စိတ်မူမမှန်ခြင်းများခံစားရနိုင်သည့်အပြင် အအေးဒဏ်မခံနိုင်ခြင်းစသည်တို့ကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ခုခံအားကျဆင်းလာပြီး ရောဂါတိုက်ထုတ်နိုင်စွမ်းနည်းလာပြီး ရောဂါမျိုးစုံဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်နှလုံးနှင့်အဆုတ်တို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မူများရပ်သည်အထိဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်။
အစာပြတ်လပ်မူကြောင့် ကိုယ်ခန္ဓာအတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်များမရှိခြင်းကြောင့် စိတ်ဂယောင်ချောက်ခြားဖြစ်ကာ စိတ်ကျဝေဒနာခံစားရနိုင်ပါတယ်။
အစာပြတ်လပ်မူအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လိုအပ်သောကယ်လိုရီ။အသားဓာတ်များ။အချိုဓာတ်။ဗီတာမင်များနှင့်စွမ်းအင်များလျော့နည်းလာသောကြောင့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်မူများ တဖြေးဖြေးလျော့နည်းလာကာ လုပ်ဆောင်ချက်များရပ်ဆိုင်းသည်အထိ အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်လာပါလိမ့်မယ်။
ထိုငျးနိုငျငံတှငျ နညျးပွအပါအဝငျကလေးငယျ၁၃ဦးပြောကျဆုံးနသေောသတငျးသညျ လူအမြားအထူးစိတျဝငျစားစောငျ့ကွညျ့နသေောသတငျးဖွဈပါတယျ။အဆိုပါ သတငျးနှငျ့ပတျသတျရျြလူအမြားသိခငျြနသေောကိစ်စတဈရပျမှာ လူတဈယောကျအနဖွေငျ့အစာမစားဘဲဘယျလောကျအခြိနျကွာအသကျရှငျနနေိုငျသလဲ.?
အဆိုပါမေးခှနျးအတှကျအစာပွတျလပျနသေောလူရဲ့ နဂိုရှိသောကနျြးမာရေး/ကိုယျအလေးခြိနျနှငျ့ရောကျရှိနသေောပတျဝနျးကငျြအနအေထားပျေါမြားစှာမူတညျပါတယျ။ခဏတာအစာမစားခွငျးသညျ အဝလှနျခွငျးနှငျ့ဆီးခြိုထိနျးမူကိုကောငျးမှနျနိုငျသညျဆိုသျောငွားလညျး ၄၈နာရီကြျောသညျအထိ အစာမစားရပါမူ မိမိရဲ့ကိုယျတှငျးအခြိုဓာတျစတငျကုနျဆုံးပွီး ၇၂နာရီကြျောလာလြှငျကိုယျတှငျးသိုလှောငျထားသောအသားဓာတျမြားလြော့ကလြာပါလိမျ့မယျ။ကွှကျသားပြော့လာကာ အရိုးသနျမာမူလြော့ရျြ ကြောကျကပျနှငျ့နှလုံးပွသနာမြားစတငျခံစားလာရပါလိမျ့မယျ။ထို့ကွောငျ့ လူတယောကျအစာမစားဘဲအသကျရှငျနနေိုငျမူသညျ ထိူသူရဲ့ကနျြးမာရေးကောငျးမှနျမှုပျေါမြားစှာမူတညျပါတယျ။သုတသေနပွုခကျြမြားအနဖွေငျ့လညျးလူတဈယောကျအစာမစားဘဲ ၈ရကျမှ၁၃ရကျထိနနေိုငျသညျဟုဆိုသျောလညျးကနျြးမာရေးအထူးကောငျးမှနျသူမြားအဖို့ရကျ၃၀မှရကျ၄၀ထိနနေိုငျသူမြားလညျးရှိသညျဟုလညျးဖျောပွကွပါတယျ။
ကိုယျခန်ဓာအတှငျးအခြိုဓာတျနညျးလာသောအခါ သှေးတှငျးအခြိုဓာတျလညျးနညျးလာပါတယျ။အစာမစားရသောအခါ အသညျးမှသိုလှောငျထားသောအခြိုဓာတျကိုကုနျဆုံးလာပွီး အခြိုဓာတျနညျးသောဝဒေနာမြားခံစားရနိုငျပါတယျ။ခေါငျးမူးခွငျး။ခေါငျးကိုကျခွငျးနှငျ့သတိလဈသညျအထိ ခံစားရနိုငျပါတယျ။
အစာမစားရသောကွောငျ့ ကိုယျတှငျးဓာတျမြားကုနျဆုံးကာ ပိုတကျဆီယမျဓာတျနညျးခွငျးကွောငျ့နှလုံးခုနျမူမမှနျခွငျးနှငျ့ကွှကျသားပြော့ခှခွေငျးစသညျတို့ကိုခံစားရနိုငျပါတယျ။ကယျလျစီယမျဓာတျခြို့တဲ့လာသောကွောငျ့ ခွလေကျထုံကငျြကိုကျခဲခွငျးနှငျ့နှလုံးပွသနာမြားရငျဆိုငျရပါလိမျ့မယျ။ဆိုဒီယမျဓာတျနညျးခွငျးကွောငျ့ သတိဝေးဝါးခွငျး။အားနညျးလာခွငျးစသညျတို့ကိုခံစားရနိုငျပါတယျ။ဓာတျခြို့တဲ့မူ အမွနျဖွညျ့တငျးမူမရှိလြှငျ အသကျအန်တရာယျထိခိုကျနိုငျပါတယျ။
နစေ့ဉျလိုအပျသောကယျလိုရီအပွညျ့အဝမရရှိခွငျးကွောငျ့ လူပျရှားမူမြားအားနညျးလာကာ ကိုယျခန်ဓာနူံးခြိပြော့ခှလောပါလိမျ့မယျ။
အစာမစားရသောကွောငျ့သံဓာတျခြို့တဲ့ကာသှေးအားနညျးသောလက်ခဏာမြား အားနညျးခွငျးနှငျ့နှလုံးမူမမှနျခွငျစသညျ့တို့ကိုခံစားရပွီး သှေးလညျပတျမူအားမကောငျးသောကွောငျ့ ကိုယျတှငျးသှေးလညျပတျမူလြော့နညျးလာပါလိမျ့မယျ။
ကွှကျသားပြော့ခှအေားနညျးကာ အဆီမရှိသောကွောငျ့ ပိနျခြုံးခြိနဲ့ခွငျးအဆငျ့ရောကျရှိနိုငျပါတယျ။ပိနျခြုံ့သောကွောငျ့ အားအငျမရှိခွငျး။ဝမျးလြောခွငျး။စိတျမူမမှနျခွငျးမြားခံစားရနိုငျသညျ့အပွငျ အအေးဒဏျမခံနိုငျခွငျးစသညျတို့ကိုခံစားရနိုငျပါတယျ။ကိုယျခန်ဓာရဲ့ခုခံအားကဆြငျးလာပွီး ရောဂါတိုကျထုတျနိုငျစှမျးနညျးလာပွီး ရောဂါမြိုးစုံဝငျရောကျလာနိုငျပါတယျ။နောကျဆုံးတှငျနှလုံးနှငျ့အဆုတျတို့ရဲ့လုပျဆောငျမူမြားရပျသညျအထိဆိုးရှားနိုငျပါတယျ။
အစာပွတျလပျမူကွောငျ့ ကိုယျခန်ဓာအတှကျလိုအပျသောစှမျးအငျမြားမရှိခွငျးကွောငျ့ စိတျဂယောငျခြောကျခွားဖွဈကာ စိတျကဝြဒေနာခံစားရနိုငျပါတယျ။
အစာပွတျလပျမူအခြိနျကွာလာသညျနှငျ့အမြှ လိုအပျသောကယျလိုရီ။အသားဓာတျမြား။အခြိုဓာတျ။ဗီတာမငျမြားနှငျ့စှမျးအငျမြားလြော့နညျးလာသောကွောငျ့ ကိုယျတှငျးအင်ျဂါမြားပုံမှနျလုပျဆောငျနိုငျမူမြား တဖွေးဖွေးလြော့နညျးလာကာ လုပျဆောငျခကျြမြားရပျဆိုငျးသညျအထိ အသကျအန်တရာယျထိခိုကျလာပါလိမျ့မယျ။
ကလေးတွေကို အားဖြည့်အချိုရည် တိုက်သင့်လား။